Sidee Registered Kaaliye Ilko - ahaan shaqooyinka la mushaar wanaagsan ee qaxootiga & Muhaajiriinta | USAHello | USAHello
Sidee Registered Kaaliye Ilko - ahaan shaqooyinka la mushaar wanaagsan ee qaxootiga & Muhaajiriinta
kaaliyeyaasha caafimaadka ilkaha diiwaan mushaaraadka ilkaha abaalmarin ay doonayeen badan
kaaliyaha dhakhtarka ilkaha ah jidka mustaqbalkiisa caan ku tahay sababo badan. Bixi ammaanka shaqo, iyo waa ay fududahay in galaan shaqaalaha. The caawiyeyaasha ilkaha si loo caawiyo dadka is ogow of ilkahooda wanaagsan. Waajibaadkooda gudanayaan sida ballamaha jadwalka, qaadashada X-rays ama caawimaad ilkaha nidaamyada. Kaaliyayaasha dhakhtarka ilkaha xirfadaha kala duwan iyo bixinta si ay faahfaahin dareenka. In this article idiinka Warrami on filayo guud ee shaqada iyo mushaharka. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad baran doontaa tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ganacsi guul ku xigeenka mustaqbalkiisa ilkaha diiwaan ah.
Waxay taageero shaqaalaha ilkaha iyo xafiiska. kaaliyaha dhakhtarka ilkaha ayaa go'aaminaya ballamiyey jadwalka bukaanka iyo haysaa diiwaanka bukaanka. Ka caawinta ilkaha halka uu isagu ama iyada oo daawaynaya bukaanku. Waxay horumar qalab, iyo qaadan images X-ray, bukaanka. Waxay hubisaa in diirsaday.
Daawo this video in badan oo ku saabsan bartaan waxa la sameeyo kaaliyayaasha caafimaadka ilkaha
Inta badan kalkaaliyayaasha caafimaadka ilkaha shaqeeyo dhakhtarka ilkaha ah oo laga yaabaa in ilkaha badan ama hal xafiiska oo kaliya. kaaliyeyaasha caafimaadka ilkaha si uu shuqulka kale ilkaha ee xarunta caafimaadka, halkaas oo ilkaha waa qeyb ka mid ah koox weyn daryeelka caafimaadka.
noqon kartaa caawiye ilko oo ka diiwaansan shaqeyn karaan remunerative. Waxaad ku caawin kartaa dad is ogow of ilkahooda oo aad hesho dakhli fiican. Sida laga soo xigtay Bureau of Statistics shaqada, sida of May 2014, ay bixiyaan caawiyeyaasha ilkaha mushaar sanadle ah celceliska 39090 $.
Ka caawinta ilkaha iyo mid ka mid ah shaqooyinka ugu dhaqsiyaha badan u kordhaya ee dalka Mareykanka. Baahida sii wadi doontaa in ay koraan, oo wax dambena weyddiisan doonaa ilkaha dadka si ay u buuxiyaan doorka kuwan.
shan xaaladood Top faa'iido for kaaliyayaasha caafimaadka ilkaha
New Hampshire, gobolka woqooyi bari United States
Massachusetts, gobolka waxa uu ku yaalaa on xeebta bari ee Maraykanka of America
North Dakota, Mareykanka
xirfadaha adag: xirfadaha maamulka, qoraalana taariikhdaada caafimaad, X-rays, iyo isticmaalka qalabka ilkaha.
xirfadaha jilicsan: Waa in uu leeyahay caawiyeyaasha ilkaha leeyihiin xirfadaha wanaagsan isgaarsiinta in ay ka shaqeeyaan dhinaca by dhinaca ilkaha iyo maamulayaasha. Waa in ay si xirfad leh oo si tartiib ah ula xiriiraan bukaan. Tani waa waxa loogu yeero “kursi Jidka” Good.
xirfadaha luqadda Waa dheelitirka weyn ee shaqo kasta! Xafiisyada Ilkaha arka badan oo bukaanka qaba Ingiriisi kooban. xirfadaha afkaaga ku caawin kara bukaanka si ay isgaadhsiin iyo kalsoontahay.
Iyadoo a dalalka yar uma baahna ruqsad rasmi ah, laakiin wax badan oo ka mid ah ma u baahan tahay. Waxay qaadan kartaa barnaamijka gargaarka caafimaadka ilkaha 9 Bilood ilaa laba sano si ay u buuxiyaan, ku xiran tahay in shahaadada ama diblooma ama barnaamijka shahaadada.
Caadi ahaan ardayda buuxiso ilkaha ka diiwaan gashan ama bulshada ama barnaamij farsamo ku xigeenka dugsiga college. Waxa intaa dheer in baridda fasalka, inta badan barnaamijyo ka siiyaan fursado waxbarasho oo wax ku ool ah in jawi caafimaad oo. Sida caadiga ah waxaa ka mid ah koorsooyinka:
Management Office Ilkaha
daroogada sayniska Ilkaha
shuruudaha Certification iyo liisan kala duwan ee gobolka. In dal oo ay shahaadada looga baahan yahay, sida caadiga ah in ardaydu ku aflaxaan imtixaanka shahaado-kaaliyaha caafimaadka ilkaha (CDA). Tani waxay 320-dheecaanka imtixaanka, kaas oo lagu qabtay xarumaha imtixaanka “Pearson VUE” Waxaa ka mid ah waxyaalaha soo socda:
dhaqanka ee kursi ee
Shucaaca Ammaanka iyo Caafimaadka
10 – Monitoring ee ka hortagga nadaafadda iyo cudurka
Sida loo Bilow
First, la sameeyo cilmi baaris si aad u ogaato shuruudaha in hay'adaha dawladda iyo dugsiyada laga yaabaa in ay u tagaan. Waxaad macluumaad ku filan ka qaadan karto mar, waxaad samayn kartaa go'aanka saxda ah kuu. Haddii aad u baahan tahay caawimaad la codsanayo in la college, akhri this article si dheeraad ah uga ogaato. Sidee baan u codsan karaa kulliyadda?
waxbarashada Ilkaha noqon karaan kuwo qaali ah, sidaas darteed waxaa muhiim ah in la qorsheeyo mustaqbalka. qiimaha Celceliska si ay u caawiyaan ilkaha kala duwanaan karaan, gobol ka gobol, laga bilaabo qadarka 850 Si aad u 7560 dollar. Wuxuu yeelan karaa barnaamijyada tababarka qaar ka mid ah sidoo kale waa lacag dheeraad ah, sida diiwaangelinta imtixaanada iyo khidmadaha shaybaarka dheeraad ah iyo sahay.
Certificate caawimo imtixaanka ilkaha
Buugaagta iyo qalabka
Research dugsiga dhigata, taas oo si ay u bartaan qiimaha gelitaanka iyo waxbarashada ujrada aad domain. College of caawimo Ilkaha Waxaa laga yaabaa in mid qaali ah, laakiin ha kaa joojiso in aad gaadho aad riyo. Waxaa jira siyaabo aad maal kartaa waxbarashada:
Mid ka mid ah tallaabada ugu horreysa in aad bilaabi kartaa waa ka kaydka. Haddii aad hadda ka shaqeeya, waxaad bilaabi kartaa lacagta lagu badbaadinayo dugsiga.
Waxa kale oo aad codsan kartaa codsiga lacag la'aan ah gargaarka federaalka ee ardayda (FAFSA), Waxaad xaq u leedahay caawinta gargaar maaliyadeed dowladda.
Deeqo ayaa sidoo kale hab fiican si ay u maal aad waxbarashada. Waxa kale oo aad eegi kartaa boggayaga liiska Deeqaha waxbarashada ee Qaxootiga iyo dadka ajaanibta ah On goobta RCO. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa this article oo kaa caawin karaan in aad baratid Sidee inay ku guuleystaan ​​akadeemiga ama qaxooti ah waddanka u soo guurey.
badan oo ku saabsan hawlaha daryeelka caafimaadka Baro
Ma waxaad raadineysaa deeq waxbarasho? Baro Deeqaha waxbarashada ee Qaxootiga iyo dadka ajaanibta ah
Waxaan u baahanahay shahaado dugsi sare si aad u bilowdo? Qaado GED ee online Dabcan Mjana®
Baro is shahaado sidii caawiye ilkaha (isku xira waayo, https://www.danb.org/Become-Certified/Exams-and-Certifications/CDA.aspx)
caawiyeyaasha mushahar iyo tirooyin kale ilkaha ee magaalo ama gobol aad (Link si https://www.bls.gov/oes/current/oes319091.htm